Nubia dia hanolotra fitaovana azo atsipy ao amin'ny MWC 2019 | Androidsis
Eder Ferreño | | Android Android, Finday
Ny taona 2019 dia taonan'ny fitaovana azo nakambana amin'ny Android. Hatramin'ny fiandohan'ny taona dia mazava fa ho iray amin'ireo fironana amin'ny taona. Hianarantsika tsikelikely ny lisitry ny marika mety mitombo ny fanipazana telefaona azo ahodina. Lisitra iray izay hidiran'i Nubia koa ankehitriny. Raha ny marina, toy ny marika hafa toa an'i Huawei, ny fitaovana azo soloina ny marika dia antenaina havoaka amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny MWC 2019.
Na dia misy fahagagana aza amin'ity raharaha ity i Nubia miaraka amin'ireo fitaovana fampirimany. Ny marika dia nalaza ho an'ny tenany tato anatin'ny volana vitsivitsy noho ny andiana maodely tena mahaliana. Eo am-piandrasana ny MWC 2019, dia nampanantena izy ireo fa hamela anay amin'ny tsy ampoizina mahaliana amin'ity fitaovana ity.
Ity fitaovana vaovao atolotry ny marika antsika ity dia ny Nubia Alpha. Na dia tsy finday avo lenta toy ny an'ny marika Android hafa aza izay haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ity herinandro ity. Satria mamela antsika ny mpamokatra sinoa finday avo lenta miendrika brasele. Drafitra vaovao izay tsy isalasalana fa hiteraka tsikera maro amin'ny hetsika telephony any Barcelona amin'ny faran'ity volana ity.
Filokana manampy azy ireo handeha manavaka ny marika rehetra amin'ny Android androany. Satria mandroso lavidavitra kokoa miaraka amin'ity fitaovana ity izy ireo. Modely iray izay eo anelanelan'ny smartphone sy ny bracelet no misy azy, noho ny endriny. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy manana ny hevitr'ity fitaovana ity fotsiny izahay. Inona no azontsika antenaina amin'ity Alpha avy any Nubia ity?
Nubia Alpha ao amin'ny MWC 2019
Nandritra ny fotoana fohy dia nisy ny resaka fa miasa amin'ny vokatra misy ireo toetra ireo ny marika. Saingy tamin'io fotoana io dia honohono izy ireo, izay tsy voamarina. Na dia farany aza dia i Nubia tenany izao no manamarina fa handeha izy asehoy ao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona ity fitaovana vaovao ity amin'ny faran'ity volana ity. Nilaza ny orinasa fa manolotra fitaovana misy efijery miovaova izy ireo. Tsy nilaza na inona na inona momba izany izy ireo.
Noho io antony io dia tsy azo atao ny manamarina amin'izao fotoana izao fa hisy ity Alfa ity, izay efa eo amin'ny sariny dia mampanantena antsika ho maodely manaitra indrindra izay haseho mandritra ny hetsika any Barcelona. Farafaharatsiny fantatsika izany afaka manantena maodely mivalona isika nataon'ny mpanamboatra sinoa.
Ankoatr'izay, hoy ny haino aman-jery sasany, tsy i Nubia irery no miasa amin'ity karazana haitao ity. Satria marika hafa toa Samsung na Xiaomi dia hivoatra izao vokatra izay mitovy. Fa raha mandeha tsara ny zava-drehetra, ny marika sinoa no voalohany nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fitaovany, amin'ity MWC 2019 any Barcelona ity. Ka io dia ampahany mitombo izay misy marika marobe Android liana.
Hatreto dia tsy nisy voalaza intsony momba ilay fitaovana kasain'i Nubia haseho ao amin'ny MWC 2019. Tsy toy ny marika hafa, ny orinasa dia tsy manana hetsika mialoha ny MWC. Fa kosa, ity fitaovana ity dia azo jerena amin'ny fomba ofisialy mandritra ny telo andro amin'ilay hetsika any Barcelona. Noho izany, ny mpanjifa manatona azy dia ho afaka hijery sy hitsapa azy tsy misy olana amin'ity hetsika ity.
Manantena izahay fa hanana angona vaovao ao anatin'ny ora vitsivitsy manaraka momba ireo drafitra Nubian ireo sy ity fitaovana avelany antsika ity. Fantatray nandritra ny herinandro maro fa ny taona 2019 dia taona ivoahan'ny finday avo lenta. Amin'izao fotoana izao amin'ity volana febroary ity dia afaka manantena maodely iray hafa isika. Araka ny fantatrao, ao anatin'ny herinandro mahery Samsung no voalohany hampahafantatra ny anao. Fotoana fohy taorian'izay, ny andro alohan'ny MWC, miandry antsika i Huawei ary ankehitriny, amin'ny hetsika iray ihany dia afaka manamafy isika fa hanolotra ny azy ireo koa i Nubia. Mety hisy marika marobe amin'ny hetsika ao Barcelona, ​​na dia tsy misy fanamafisana aza, amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Nubia dia hanolotra fitaovana azo ahodina ao amin'ny MWC 2019 ihany koa
Huawei dia maniry any Shina raha mampihena ny fandefasana azy kosa i Apple